पशुपति शर्माले लुट्न सके लुट कान्छा गित यूट्युब बाट हटाउनुको खास कारण यस्तो ! कसले हटाउन भन्यो ? - Enepalese.com
पशुपति शर्माले लुट्न सके लुट कान्छा गित यूट्युब बाट हटाउनुको खास कारण यस्तो ! कसले हटाउन भन्यो ?
इनेप्लिज २०७५ फागुन ५ गते २३:५२ मा प्रकाशित
उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा केही समय अगाडि लेखेका छन्, “म पनि यही देशको एक सचेत नागरिक साथै कलाकार भएको नाताले देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार, घुसखोरी र जिम्मेवारहरुको अकर्मण्यता विरुद्द आवाज उठाउन पाउने मेरो नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरामा म दृढ रहेको कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु । पशुपति शर्माले लुट्न सके लुट कान्छा गित यूट्युब बाट हटाउनुको खास कारण यस्तो ! कसले हटाउन भन्यो ? हेर्नुहोस भिडियो :